China Isiphatho seStrongman Strongman mveliso kunye nabathengisi Ukuqhayisa
Isiphatho sethu sehandbag esomeleleyo senziwe ngokusekwe kwisandabha yomeleleyo, siphucula uyilo ukuze lusebenzise ngokulula. Olu luyilo lutsha lwenza isiphatho esomeleleyo sesandbag esiphatha imisebenzi yengxowa yamandla. Ungaphatha, uphakamise, uhambise ingxowa yesanti yomelele ngokulula.Sebabags zinokukhululwa kwaye ziphinde zigcwaliswe kwenye indawo yokuzivocavoca, ebaleni, epakini, njl.
I-Handle Strongman Sandbags ziyafumaneka ngobukhulu be-50lb-150lb, ungakhetha ubungakanani njengoko kufuneka.Yenziwe nge-1050D Cordura 100% yenylon yempahla, i-YKK zipper. Ingxowa nganye yesanti inengxowa eyahlukileyo yokugcwalisa eneziphu ezongezelelekileyo kunye nokuvalwa kwe-hook-and-loop-ukuqinisekisa ukuba izinto zokugcwalisa zihlala ziqulathe ngokupheleleyo njengoko usebenza kwirejimeni yakho. Ukuvulwa kwegobolondo yesanti eStrongman nge-YKK uziphu, inokuthintela ukuba ingxowa iqhume.
Nceda uqaphele: Ubunzima bokulayisha i-Strongman Bag buxhomekeke koxinano kunye nobungakanani beendaba ezisetyenziswayo. Imithombo yeendaba ethile inokubangela ukuba ubunzima bebhegi bube ngaphezulu okanye ngaphantsi komthamo wobunzima obuqikelelweyo. Ngenxa yobume belaphu kunye nokusetyenziswa okuchongiweyo, iingxowa zeStrongman zinokwanda ngokuhamba kwexesha kunye nokusetyenziswa. Ukongeza, ezi ngxowa azizaliswanga.
Ubungakanani be4.: 50lb-150lb.
Egqithileyo Iibhloko zeJerk
Okulandelayo: Umsebenzi onzima wesanti-A
Handle Isikhwama soqeqesho